Izinhlamvu ze-fungal zungeze abantu kuyo yonke indawo. Ezinye zazo zihlala zikhona ekubunjweni kwe-microflora yesikhumba kanye nezibungu ezingenangqondo futhi kuphela uma ukuzivikela kuphazamiseka kuqala ukuphindaphindiwe ngenkuthalo, kubangela ukuphazamiseka kumthwali walo.
Ukukhohlakala futhi okumbi, noma ukuthi ukufotoshwa kwama-nails kubonakala kanjani
Ngaphandle, i-fingernail ethintekile yi-fungus iyashintsha kakhulu: ilahlekelwa ukukhanya kwayo yemvelo, ilukhuni, i-flakes off, iyakhathazeka, ithola i-tinge ephuzi futhi, uma ingalashwa, ingaqedwa ngokuphelele.
Umuntu okwesikhashana angase angaboni ukuthi une-mycosis. I-fungus emilenzeni, izimpawu okungase kube nzima ukuzibona, ngezinye izikhathi zibonakalisa ukukhwehlela okuncane kwesikhumba sezinyawo kanye nokugqoka ezimhlophe. Kwenzeka ukuthi lesi sifo siqala ngokubunjwa kwemifantu emincane phakathi kweminwe noma ukukhipha okuncane kwe-nail. Ukunciphisa isikhumba kanye nomunwe, i-fungus yenza isakhiwo sezinto ezivikelayo sivuleke, okufaka ekwakheni amanxeba kanye nezilonda ezinzima ukuphulukisa. Kanti, amanxeba angaphinde afakwe igciwane nama-bacteria, okuyinkimbinkimbi kakhulu yenkinga yesifo.
Izifo ze-fungal kunzima ukuphatha, ngoba izifo zabo eziphuthumayo ngokushesha ziphikisana nemiphumela yemithi. Imfucumfucu yezifokili ezigulayo ngokoqobo idla iphila. Ekuqinisekiseni inzalo ngizochaza lokho engikuhlangenwe nakho ekulwa nesifo esiyingozi. Ngakho-ke, ukubhujiswa kwama-nail kutholakala esihlotsheni esidala, okwasala intando yami ekunakekeleni kwami. Owesifazane waqala ukutheleleka eminyakeni engamashumi amane futhi, lapho ebonane nodokotela, wathola iseluleko sokuphatha izindawo ezithintekayo ngamafutha antifungal. Naphezu kokuthi lesi sifo asizange sidlule, kuze kufike usuku lokuzalwa lwesishiyagalombili, lesi sihlobo silandela iseluleko seminyaka engamashumi amane edlule, singakwazi ukuthi isikhunta ngokushesha silahlekelwa ukuzwela kumadivayisi wezokwelapha futhi ukhilimu asebenzisayo sekulahlekelwe isikhathi eside. Kwangikhathalela kakhulu ukunqoba le fungus. Ngakho-ke, lapho ngixoxa nodokotela, ngathola izinto ezibaluleke kakhulu: isikhunta singangena emathanjeni ajulile esikhumba futhi, uma kunikezwe isikhathi nobukhulu besifo, imiphumela yendawo yodwa ayifanele. Ukwelapha kufanele kube okuphelele: ukudla okunempilo (okusanhlamvu, imifino, izithelo ezomisiwe), amavithamini, amaphilisi antifungal, amalungiselelo okubuyiselwa kwamagciwane emathumbu, izinqubo zokuhlanzeka kwezinyawo.
Amanzi okugeza usawoti - kabili ngosuku.
Uma isikhunta sezinyosi esiye sishaywa isilonda singelashwa ngosizo lwamafutha okugcoba, kufanelekile ukusebenzisa "izikhali ezinzima". Kulesi simo, kwakuyizinyawo zokugeza ngamanzi usawoti (noma ufulawa ovamile wetshezi kanye namaconsi amaningana e-iodine). Izikhukhula zesikhumba ezifile kanye nezipikili zisuswe ngesikhala somunyu. Ngemva kokugeza, izinyawo zazisulwa ngokucophelela.
Ukwelapha i-iodine - kabili ngosuku.
Njengoba kwakukhona amanxeba angaphilisi emilenzeni, asizange sisebenzise isisombululo sotshwala. Ukomiswa okuphawulekayo nomphumela wokukhipha imishanguzo kunesixazululo se- "Betadine", esasiphatha ngayo izindawo ezithintekile zesikhumba.
Ama-antibiotic antifungal endaweni yangakini nangokwemvelo - ngokusho kwesimiso esikhethwe udokotela.
Umsebenzi wethu onzima awulwanga. Kungakapheli izinyanga ezintathu, izilonda eziphilile esikhumbeni. Ezinyangeni eziyisithupha kamuva, zonke izibonakaliso zesifo zaphela ngokuphelele futhi izipikili ezintsha ezinempilo zakhula. Ngakho-ke, siphetha ngokuthi ngisho necala elinganakekelwa kakhulu lingelashwa. Kubalulekile kuphela ukulandela izincomo zodokotela ngokuqondile.
Siyakhathalela abathandi bekhaya lokuzithokozisa ukuthi i-fungus "ayidluli ngokwayo". Ukunciphisa okwesikhashana inqubo yokuvuvukala esikhumbeni - hhayi ithuba lokuphazamisa ukusetshenziswa kwezidakamizwa ezibekwa udokotela.